သြဂုတ်လ 2016 | 66 ၏စာမျက်နှာ 132 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 66)
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းသူများ City, State Raleigh, NC Duration 1 day - 8/17 လစာမရရှိသေးပါအလုပ်အကိုင် 08/12/16 တွင်တင်ထားသည် 08/17/16 အားဖြင့်လျှောက်ထားပါဝက်ဘ်ဆိုက်ဖော်ပြမထားမျှဝေပါအလုပ်အကြောင်းမျှဝေပါဖျော်ဖြေပွဲတွင်ဒါရိုက်တာကိုကူညီခြင်းပါဝင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရုံတပြင်လုံးကိုရိုက်ကူးဘို့မိမိတို့အထောက်အကူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ။ တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများမှာညွှန်ကြားရေးမှူးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကူညီခြင်း၊
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် San Diego မှ,, CA Duration: 1 နေ့က - 8 / 19 / 08 အပေါ် posted 12 / 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 08 / 19 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမစန်းအတွက်အသံရောနှောလိုအပ် တစ်ဦးကိုတနေ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့ Diego မှ။ shoot အိမ်ပြင်အများစုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းကင်မရာ doc စတိုင်ပစ်ခတ်မှုအပြင်, ကျနော်တို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် ...
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားအော်ပရေတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Indianapolis, Duration: 1 နေ့က IN - 8 / 28 / 08 အပေါ် posted 12 / 16 လစာနှုန်းကိုယောဘကို Send Self-အာမခံထားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အော်ပရေတာရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 28 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply Indianapolis IN အတွက် 1 /2နေ့ကရိုက်ကူးအပေါ်ဒေသခံတစ်ဦးအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်သူကိုယ်ပိုင်ဂီယာနှင့်အတူ။ မှုနှုန်းနှင့်ကင်မရာကိုအထုပ်နှင့်အတူအကြောင်းပြန်ပါ။ ...
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များစီအီးအိုအဖြစ်တွမ် Gittins ကိုကြေညာ
Pebble Beach Systems ၏အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု၊ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘက်စုံကစားခြင်းဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ Tom Gittins အားအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ကြောင်းယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ အနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Peter Hajittofi ကို Tom နေရာတွင်အစားထိုးခဲ့သည်။ သူသည် Chief Operating Officer ၏အခန်းကဏ္ in သစ်တွင် Peter Mayhead ၏ပံ့ပိုးမှုကိုခံရလိမ့်မည်။ တည်ထောင်သူဒါရိုက်တာ Ian Cockett သည်သူ၏အဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။
ရာထူး - ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ - LBI မီဒီယာတည်နေရာ - Burbank CA US LBI Media, Inc. ရေဒီယိုအသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာကျွန်ုပ်တို့သည် LBI Media, Inc ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကပိုင်လူနည်းစုပိုင်ဆိုင်သောစပိန်စကားပြောထုတ်လွှင့်သူဖြစ်သည်။ နှင့်ထိပ်တန်းဟစ်စပန်းနစ်စျေးကွက်အတော်များများတွင်အလုပ်လုပ်သောရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများနှင့် Estrella TV Network ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်ဆုံးတိုးတက်နေသည့်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက် ...
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များနယူးခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ဦးခေါင်းမှ CEO အဖြစ်တွမ် Gittins ကြေညာ
IBC ယင်း၏ Centenary တစ်နှစ်တာ SMPTE အခမ်းအနားကျင်းပရန်
IBC2016 Awards အခမ်းအနားတွင် SMPTE ၏နှစ်တစ်ရာသမိုင်းကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ SMPTE သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး IBC Partnership ကိုဖွဲ့စည်းသည့်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (၆) ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံအင်ဂျင်နီယာများ (၁၉၅၀ တွင်ရုပ်မြင်သံကြားကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်) ပထမဆုံးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့သည်။ အဓိကမောင်းနှင်သူ ...
Position: Radio Broadcast-Transmitter Engineer Company: Rich Broadcasting Location: Idaho Falls ID US JOB SUMMARY Rich Broadcasting is looking for an experienced, self-starter Broadcast Engineer, who has the technical and analytical skills needed to solve system technology issues. The ideal candidate will work and assist with the installation and daily maintenance of all studio, transmitter and computer related equipment. In addition, ...
66 ၏စာမျက်နှာ 132«ပထမဦးစွာ...405060«6465666768 » 708090...နောက်ဆုံး»